Djibouti Oo Sheegtay Inay Ciidamo U Diray Somalia Iyo Wasiirka Gaashaandhiga Uganda Oo Muqdisho Booqday | Araweelo News Network (Archive) -
Djibouti Oo Sheegtay Inay Ciidamo U Diray Somalia Iyo Wasiirka Gaashaandhiga Uganda Oo Muqdisho Booqday
Djibouti (ANN) Dawlada Djibouti ayaa sheegtay inay ciidamo u dirayso dalka Somalia ee dagaalada naafeeyeen, kuwaas oo ka qayb qaadanaya hawlgalada loogu yeedho nabad ilaalinta ee ciidmada Uganda iyo Burundi ee AMISOM ka wadaan halkaa. Sidaana waxa
Idaacada VOA u sheegay Col Cali Suubane Shirdoon oo ah ku xigeenka Taliyaha sare ee gaashaandhiga Djibouti, isla markaana u xil saaraan ciidamada la geynayo Somalia ayaa sheegay inay tirada ciidmada ay u dirayaan Somalia noqonay 900 oo askari oo ka socda Djibouti.
Col Cali Suubane waxa uu sheegay in ciidamadan ay haatan dhameysteen tababarkii iyo qaban-qaabadii ugu danbeysay oo ay diyaar u yihiin in loo diro Somalia si ay qeyb uga noqdaan ciidamada nabad-ilaalinta ee ka socota midowga Afrika.
Dhinaca kale Wasiirka Gaashaandhigga Yugandha Mr. Crisps Keying ayaa maanta socdaal kedis ah ku tegey magaalada Muqdisho, waxaana halkaa kusoo dhoweeyay ku simaha Raysal wasaaraha Somalia , isla markaana ah Wasiirka Gaashaandhigga dawladda taagta daran ee Somalia Mudane Xuseen Carab Ciise iyo masuuliyiin kale. waxayna Wasiirka Gaashaandhiga Uganda iyo masuuliyiinta soo dhoweeyay kormeer ku tageen xerada cusub ee Barakacayaasha ee Rajo, halkaas oo ay ku jiraan kumanaan qoysas ah oo ka soo barakacay gobolada dalka oo ay ka jiraan abaaraha iyo macaluusha baahsani. Wuxuuna hadal uu ka jeediyay haween iyo caruur ka mid ah dadka xeradaa ku jira u sheegay inay dawladiisu la qaybsanay dhibaatada ku habsatay shacabka Soomaaliyeed.
Wasiirka Gaashaandhigga Yugandha Mr. Crisps Keying oo warbaahinta uga waramay socdaalkiisa ayaa u sheegay in muhiimad gaar ah ay u tahay dowladdiisa Uganda inuu soo booqdo magaalada Muqdisho oo ay ka joogaan Kumanaan ciidamo Nabad illaalin ah, wuxuuna ka mahadceliyay soo dhoweynta loo sameeyay. isagoo kulan kula yeeshay madaxtooyada masuuliyiinta dawlada taagta daran.